Maxay ku heshiin karaan Soomaaliya iyo Soomaaliland? ‘Warbixin Xasaasiya ‘ | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Maxay ku heshiin karaan Soomaaliya iyo Soomaaliland? ‘Warbixin Xasaasiya ‘
Maxay ku heshiin karaan Soomaaliya iyo Soomaaliland? ‘Warbixin Xasaasiya ‘
Mas’uuliyiinta Soomaaliya ayaa mar walba ku celiya inay diyaar u yihiin sidii ay miiska wadahadalka ula fariisan lahaayeen Soomaaliland, halka madaxda jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqdayna ay tabanayaan arrimo badan.
Labada dhinac ayaa horay u wada fariistay, wax heshiis ahna ma dhex marin, inkastoo aysan kulmin sannadihii ugu dambeeyay, intii ay jirtay dowladda federaalka ee uu hoggaamniyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Maxay ku heshiin karaan labada dhinac?
Muddo ku dhawaad 30 sano ah, Soomaaliland, oo loo aqoonsan yahay inay tahay gobollada dhinaca waqooyi ee Soomaaliya, waxaa ka jiray maamul ka duwan Soomaaliya inteeda kale, waxaana ka howl galeysay dowlad iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaani.
Dadka u dhuun daloola arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan uga hadla mowduuca ku saabsan isu soo noqoshada Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Cabdiraxmaan Aadan Ruush oo ka faallooda siyaasadda ayaa BBC-da uga warramay waxa ay ku heshiin karaan labada dhinac.
“Mushkiladda heysata labada qeybood waa inaysan daacad ka ahayn in si toos ah loo wada hadlo, intii uu wadahadalku socday lama soo xulin dad aqoon leh oo ka fikiri kara danaha labada dhinac, marka aniga waxay ila tahay in arrintan loo xil saaro guddi aqoonyahanno ah oo eegaya mustaqbalka fog”, ayuu yidhi Cabdiraxmaan Aadan.
Wuxuu dhanka kale sheegay in wada xaajoodku uu horseedi karo mid ka mid ah labada mowqif ee ay kala taagan yihiin Soomaaliya iyo Soomaaliland.
“Haddii is afgarad dhaco waxaa laga yaabaa in Soomaaliland ay ku qanacdo in afti la sameeyo, go’aanna laga gaaro inay go’ayaan, ama waxaaba suurtagal ah in lagu midoobo dowlad federaal ah”, ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Ra’iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa shaaca ka qaaday in Soomaaliland ay khasaarisay fursad gacanteeda soo gashay.
“Waxaan kuu sheegayaa in dhawaan ay Soomaaliland lumisay fursad dahabi ah oo ahayd in ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweyne Farmaajo ay rabeen in iyagoo wada socda ay ka dagaan Hargeysa, laakiin markii madaxweynaha Soomaaliland iyo maamulkiisa ay wada tashadeen ma aysan suurtoobin, ilaa haddana dhankeenna diyaar baan u nahay inaan mar walba tagno, ha noqoto Farmaajo oo kaligiis ah ama isagoo uu la socdo Abiy”, ayuu yidhi.
Image captionFarmaajo ayaa horay u booqday Itoobiya
Intii ay jirtay dowladda federaalka ee uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaa hakad ku jiray wadahadalladii siyaasadeed ee u dhaxeeyay dowladda Federaalka Soomaaliya iyo jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Soomaliland.
Tan iyo markii dhidibbada loo aasay maamulka Soomaaliland, waxaa socday dadaal lagu raadinayay aqoonsi caalami ah oo ay hesho madaxbannaanida Soomaaliland, balse wali ma suurta galin.
Hase yeeshee, waxaa muddooyinkii dambe soo badanayay dalalka daneynaya ama u kuur galaya hannaanka maamulkaasi.
Magaalada Hargeysa ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa aad ugu badnaa socdaalka ay ku tagayaan diblumaasiyiin iyo siyaasiyiin heerkoodu sarreeyo oo ka kala socday dalal iyo hay’ado kala duwan.
Madaxweynihii hore ee Nigeria, Olusegun Obasanjo oo dalkaas madaxweyne ka soo noqday intii u dhaxeesay sanadihii 1999-kii ilaa 2007-dii ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Hargeisa ee Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland.
Wuxuu ka hadlay ujeedada uu u tegay Somaliland
Madaxweyne Obasanjo ayaa garoonka magaalada Hargeysa waxaa kusoo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka Somaliland, xubno ka mid ah golaha wasiirada, duqqa caasimada, mas’uuliyiin katirsan axsaabta siyaasadda ee Somaliland, waxaana uu booqasho ku tegay xarumaha golaha wakiillada iyo maxkamadda sare, halkaas oo uu kula kulmay saraakiil katirsan laamaha kala duwan ee dowladda oo ay kamid yihiin waaxda garsoorka.
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa hadhimo-sharafeed ku maamuusay madaxweynihii hore ee Nigeria, oo madaxda maamulkaas ay shegeen in booqashadiisu ay tahay mid rasmi ah.
Dhanka kale waxaa 19-kii Maarso booqasho taas lamid ah magaalada Hargeysa ku tagay Wasiirka arrimaha dibadda dalka Eretria, Osman Saleh.
Wasiirka arrimaha dibadda dalka Eretria, Osman Saleh.
Sidoo kale waxaa siyaasiyiinta socdaallada kala duwan ku tagay Hargaysa kamid ah, Xoghayahii hore ee difaaca dalka Ingiriiska Gavin Williamson, oo 6-dii Janaayo ee sanadkan booqasho ku tagay Hargeysa.
Previous articleKalashaki Kadhashay Shaqaalaha Rayidkaa ee Dowlada Iyo Laamaha Amaanka
Next articleDagaal Culus oo Kasocda G/shabeelaha Dhexe iyo Wararkii Ugu Dambeeyay
Wasiir Cawad & danjire Mehmet Yilmaz oo ka wada hadlay labo qodob (Sawirro)
Kala Carar Ka Jira Caawa Wadada Maka Al Mukarama & Gaari Qarax Looga Shakiyey
Gabar caawa si argagax leh ugu dhimatay degmada Warta-nabada kadib markii Booto bajaaj…
Xildhibaanada tageersan Xukumada iyo Farmaajo oo kulan dhoolatus siyaasadeed maanta kuleh Muqdisho
Ciidamada Kenya oo Wajahaya Walaacii Abid Ugu Badnaa…
Taliska Boliska somaliya Oo ciidama dheeraada keenay Jidadka Waaweyn ee muqdisho sheegayna In Ay
Sawirro:-MD Mustafe Cagjar Oo Gogol Nabadeed U Fidiyay Beelihii Ku Dagaalamay G/Sool
Dil aad u argagax badan oo hada kadhacay albaabka madaxtooyada &shacabka oo ka argagax hadalka Askariga
Warbixin Naxdin leh oo sheegeysa Dhul gariir ku dhufanaya Qeybo kamid ah Somalia…
XOG: Xildhibaano abaabulaya Mooshin ka dhan ah Fahad Yaasiin [Ujeedka]
Madaxweynha Shiinaha oo Si’aan Waligeed Aduunka Kadhicin Loogu Soodhaweeyay Kuuriyada Waqooyi